Ungaluhlengahlengisa njani ithoni kuHlelo lokuFota loMtshato
Kwifoto yedijithali yomtshato, kuya kufuneka ulungelelanise ithoni yemifanekiso yakho. Ithoni ijongana noluhlu lwezona ndawo zimnyama kwezimnyama kumfanekiso wakho kwaye yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwinkqubo yokuhlela ifoto. Ithoni yindlela onokulungisa ngayo ukubonakaliswa, ukuphinda uveze iindawo eziqaqanjelweyo (Oko kukuthi, yenza mnyama iindawo eziqaqambileyo ezikhanya kakhulu), qiniseka ukuba abamhlophe bakho abamhlophe kwaye abamnyama bakho bamnyama, kwaye wandisa ukungafani komfanekiso.
Ukuba ukhe waqaphela ukuba umfanekiso ujongeka ungwevu ngokuthe ngqo ngaphandle kwekhamera, uhlengahlengiso lwethoni kulapho ungayilungisa khona loo ngxaki kwaye ujike ifoto emfiliba ibe yeyodlamkileyo. Uyawubona umahluko phakathi komfanekiso ongacwangciswanga kunye nomfanekiso ohleliweyo.
Ityala: 36mm, 1/160 sec., F / 2.8, 125
Xa sele ukulungele ukuqala ukulungelelanisa ithoni yakho, khetha ifoto ofuna ukuyilungisa kwi-filmstrip ezantsi kwesikrini sakho se-Photoshop CS6 okanye ucofe kabini kwi-thumbnail yesithombe kwimbonakalo yegridi. Emva koko yiya kwimodyuli yoPhuculo kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini sakho kwaye ucofe kwipaneli yokuhlela esisiseko kwicala lasekunene.
Kwiphaneli ephantsi kwethoni luluhlu lwezi zinto zintandathu zilandelayo kunye nebha yokuhambisa ecaleni kwayo:
Ukungakhuseleki: Njengoko usenokuba uqikelele kakade, ibha yokubonisa ilawula ukubonakaliswa, okanye ukukhanya okanye ubumnyama besithombe sakho. Ukuqaqambisa umfanekiso wakho, yisa isilayida uye ngasekunene. Ukuba umfanekiso wakho uqaqambe kakhulu, shenxisa isilayida ngasekhohlo ukuze wenze mnyama isithombe sakho.
Ukubuyisela kwimeko yesiqhelo: Lo msebenzi ukuvumela ukuba ubumnyama nje kwezona ndawo zikhanyayo zomfanekiso wakho eziqaqambe kakhulu (amagqabantshintshi aphume ngaphandle). Ukubuyisa amanqaku akho aphezulu, shenxisa isilayida uye ngasekunene de umfanekiso ujonge kuwe.
Gcwalisa ukuKhanya: Eli nqaku lichasene ngqo nokubuyiselwa. Ikuvumela ukuba ukhanyise iindawo zomfanekiso wakho ezimnyama kakhulu (ekwabizwa ngokuba ukuphakamisa izithunzi ).
Gcina ukhumbula ukuba okukhona usityhala eso silayida ngasekunene, kokukhona ukutya okuziinkozo kufakwe kumfanekiso.
Abantsundu: Eli nqaku likuvumela ukuba mnyama mnyama. Ngaba wakha wajonga ifoto yomyeni kwi-tux yakhe emnyama kodwa waqonda ukuba i-tux ijongeka ngokungathi ingwevu emnyama kunomnyama? Isilayida esiMnyama yinto onokuyisebenzisa ukuqinisekisa ukuba abantu abamnyama kwifoto bavele ngendlela efanelekileyo.
Ukuqaqamba: Umahluko phakathi kwemisebenzi yokuBonisa kunye nokuKhanya kukuba ukuBonakalisa kukhanya umfanekiso wakho uphela kodwa kubeka ugxininiso ekukhanyeni kwezona ndawo zikhanyayo zesithombe. Ukuqaqamba kwelinye icala kutshintsha ukukhanya, okuphakathi, kunye neethoni ezimnyama ngokulinganayo. Rhoqo, ukuba usebenzise ukuBhengeza, ukubuyisela kwakhona, ukugcwalisa ukukhanya, kunye nezilayida eziMnyama esele zikho, awunyanzelekanga ukuba usebenzise lo msebenzi.
Umahluko: Lo msebenzi ukuvumela ukuba wenze ubumnyama bakho bube mnyama ngakumbi kwaye izibane zakho zibe lula, ke oko kuyandisa umahluko phakathi kwala maxabiso kumfanekiso wakho. Umahluko unokongeza ubunzulu obuninzi kwifoto yakho kwaye uyenze pop.
Njengoko uhlengahlengisa ithoni yomfanekiso wakho, ukuba awonwabanga ngendlela ejongeka ngayo, ungoyiki! Ukuba ufuna ukuqala ngaphezulu, cofa kwindawo ethi Setha kwakhona kwikona esezantsi ekunene kwesikrini. Ukuba, nangona kunjalo, ufuna ukuhlehlisa ukuhlela kwakho kokugqibela, ungacinezela u-Command + Z (Mac) okanye uLawulo + Z (iiWindows) ukubuyela emva inyathelo elinye.
Kwelinye icala, ukuba uhlela ifoto kwaye uyayithanda indlela ebukeka ngayo kwaye ungathanda ukufaka ulungelelwaniso olufanayo kwezinye iifoto, i-Lightroom ineempawu zokuvumelanisa ezikuvumela ukuba wenze kanye loo nto. Inqaku lokuvumelanisa liyamangalisa kuba ligcina ixesha elininzi.
Ukuvumelanisa ukuhlela, khetha ifoto yakho ehleliweyo ngokunqakraza kuyo kwaye ucofe i-Command (Mac) okanye uLawulo (lweWindows) kwaye ucofe kwezinye iifoto kwifilimu yakho ofuna ukuyilungisa. Xa unemifanekiso ekhethiweyo, cofa kwi-Sync emazantsi-ekunene kwescreen sakho ukufaka konke ukuhlela ukusuka kwifoto yokuqala ukuya kwezinye iifoto ezikhethiweyo.
Ukuba uhlela ukuhlela kwaye uthathe isigqibo sokuba awuzithandi, sebenzisa i-Command + Z okanye uLawulo + Z ukulungisa ukuvumelanisa.
I-antibiotiki yokusuleleka kwintsholongwane
Isikhokelo se-ibuprofen davis
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-meclizine 25mg
ungathatha ibuprofen nge-flexeril
amaxesha emva kokufakwa kwemirena
Ngaba ipravastatin inegazi elincinci